Izitabane zigxeka iSenzo somlingisi | IOL Isolezwe
Izitabane zigxeka iSenzo somlingisi
Isolezwe / 16 May 2012, 11:40am /
YISO lesi sinqandi esisuse igidigidi ezinkundleni zokuxhumana nakwabathandana nabobulili obufanayo. NgoMsombuluko uNoluntu noSenzo bavele badumelana ngesikhathi omunye eyocela ukududuzwa ngumngani wakhe
IZITABANE eziningi azihambisani nokuziphatha kukaSenzo (Thami Mngqolo) njengoba evele wadumela uNoluntu (Zenande Mfenyana) ngesinqandi
SEKUQUBUKE umsindo ngesinqandi sabalingisi be-Generations njengoba izinhlangano zabathanda abobulili obufanayo bethi lo mdlalo udukisa isizwe.
Lesi sinqandi esenzeke esiqeshini sangoMsombuluko ebusuku, siphakathi kukaNoluntu (Zenande Mfenyane) noSenzo (Thami Mngqolo), ekubeni uSenzo uthandana nowesilisa (Jason) kulo mdlalo.
Izinhlangano ezehlukene zabathandana nabobulili obufanayo zithi iGenerations idukisa iyasiqeda isizwe ngalesi sinqandi ngoba umuntu othanda ubulili obufanayo ngeke ashintshe esikhaleni abe nemizwa yobunye ubulili.
Okususe wonke lo msindo yisinqandi esivuthayo abashayane ngaso njengoba uSenzo ubeyocela ukududuzwa “ngumngani” wakhe uNoluntu.
UNoluntu umzwelile waze wamgona emtshela ukuthi konke kuzolunga, kwadlula umzuzwana base bedumelana.
Ngemuva kwalesi siqephu kube nokwehluka kwemibono njengoba abanye bebethi lesi siqephu sikhombisa impilo ephilwa ngabantu bakuleli.
Abathandana nabobulili obufanayo bathe lesi siqephu sithumela umlayezo ongesiwo emphakathini ngoba abantu sebezozitshela ukuthi ayikho indaba yobutabane.
UNksz Nonhlanhla Mkhize we-Durban Lesbian & Gay Community & Health Centre uthe yize engayilandeli iGenerations kodwa uyazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu baye baphile impilo yamanga ngoba befuna ukujabulisa imindeni.
“Bekungakuhle ukuthi abantu baxoxe ngalolu daba njengoba nawe ungifonele wangibuza ukuthi ngabe kuyenzeka yini ukuthi umuntu ashintshe angabe esaba nemizwa yabantu abanobulili obufanayo. Khona akuvamile ukwenzeka kodwa umuntu ozithola ekulesi simo usuke ebhekene nobunzima,” kusho uNksz Mkhize.
Ugqugquzele imindeni ukuba ixoxe ngezihloko ezithinta ubulili ngoba unethemba lokuthi ababhali beGenerations bafuna umphakathi ufunde okuthile kulesi siqephu.
UMnuz Anthony Waldhuisen we-Gay & Lesbian Network uthe akakholwa wukuthi owesilisa othanda umuntu onobulili obufanayo angavuka esenemizwa yowesifazane kodwa kungaba wukudideka kwesikhashana nje.
Uthe kuyenzeka ukuthi ezinye izitabane zizithole sezishada ngoba ziphoqwa yinkolo nosiko.
“USenzo mhlawumbe uqabule intombazane ngoba ebona ukuthi uyise akajabule ngobutabane bakhe. Ngiyethemba ukuthi imindeni nomphakathi izogqugquzela abantu abathandana nabobulili obufanayo ukuba baphumele obala bangabandlululwa. Wubandlululo olubenza bazithole sebephila emakhoneni sebenza izinto abangazithandi,” kusho uWaldhuisen.
Ezinkundleni zokuxhumana imibono ibihlukene bebodwa abathi sebuphelile ubutabane kwiGenerations, abanye bebegqugquzela uNoluntu ukuba aqabule uSenzo.
Imizamo yokuthola ukuphawula kubabhali beGenerations iphunzile njengoba bengayiphendulanga imibuzo abathunyelelwe yona.